4D ရလဒ်များ၊ TOTO ရလဒ်များ၊ LOTTO 4D၊ TOTO4D အတိတ်ရလဒ်များ။ Singapore Pools ၊ Magnum Malaysia
4d ရလဒ်များ၊ Toto ရလဒ်များ၊ Sweep Results၊ Singapore Pools 4d၊ Toto၊ Magnum 4D
အခွင့်အလမ်းကြီး။ ကဲ ဘာလဲ?
25-11-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : အထွေထွေ
4D၊ Toto ကို အလွယ်တကူ Win
အခမဲ့ 4D Ebook ဖြင့်7ရက်အတွက် အခမဲ့ ပရီမီယံ 4D ခန့်မှန်းနံပါတ်များ။
“ လျှို့ဝှက်ချက် ၁၄ စင်္ကာပူနှင့် မလေးရှား 4D အောင်ပွဲခံရန် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်"
အခမဲ့ Ebook ($97 တန်ဖိုး)
အခမဲ့ ပရီမီယံ 4D ၇ ရက်အတွက် ခန့်မှန်းဂဏန်းများ
4DinSingapore သည် သင့်ဘဏ်အကောင့်တွင် အကျုံးဝင်မည့် #1 ToTo 4D Prediction Partner ဖြစ်သည်။
20-11-2020 တွင် တင်ခဲ့သည် : 4D မာစတာ | တွင် : အထွေထွေ
4D နှင့် ToTo ကို မည်သို့စတင်ရမည်နည်း။
4d ကို စတင်ရန် လွယ်ကူသော အဆင့် ၄ ဆင့်၊
စင်ကာပူ 4D၊ ToTo
Magnum 4D ခန့်မှန်းချက်
4D Master ဆင်းသက်လာပါလိမ့်မယ်။
Strike ToTo Jackpot၊
4D ထိပ်တန်းဆု ၃ ဆု။
အနိုင်ရရှိသောရလဒ်များကိုစစ်ဆေးပါ။ အဆင့် ၄
ဟွတ်။ Win Money
4D Master ၏စားပွဲမှ
17-11-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : အထွေထွေ
ချစ်ခင်ရပါသော 4D၊ ToTo ဝါသနာအိုး
မင်းဘာတွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ရလဲ ငါသိတယ်။
သင်သည် 4D သို့မဟုတ် Toto မှ ချမ်းသာအောင် သက်သေပြနိုင်သော နည်းလမ်းကို ရှာဖွေရန် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရှာဖွေနေပါသည်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ မင်း ဒီဝဘ်ဆိုဒ်ကို ရောက်သွားတယ်။
4d ဂိမ်းကို ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကျော်ကြာ ကစားပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရာတစ်ခုကို သဘောပေါက်လာပါသည်။ ထို 4d နှင့် toto သည် ခန့်မှန်းချက်များကို အသုံးပြု၍ အကောင်းဆုံးအနိုင်ရသည်။ မည်သည့်ဟောကိန်းမျှမဟုတ်၊ လက်တွေ့ကျသောဟောကိန်းများ။
အဲဒါကြောင့် ဒီ website နဲ့ ထွက်လာတာပါ။ တိကျသော 4D ခန့်မှန်းချက်ဖြင့်၊ ယခု သင်သည် သင်၏ချေးငွေများကို ဆပ်ရန် သို့မဟုတ် အိပ်မက်အားလပ်ရက်ကို သွားရန်ပင် အခွင့်အရေးရနေပြီဖြစ်သည်။ $10 လောင်းကြေးသည် စတင်သည့်ဆုပေါက်သည့်တိုက်ရိုက်နံပါတ်တစ်ခုတွင် အလောင်းအစားတစ်ခုက သင့်အား $250 X $10 = $2500 ကို အလွယ်တကူ ရယူနိုင်သည်။ $500 ၏ 1st ဆုထက် $2000 ပိုများသည်။ ယနေ့ အခမဲ့7ရက်အစမ်းသုံးမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
ဤသည်မှာ $10 အလောင်းအစားသည် သင့်ဘဏ္ဍာရေးအတွက် အံ့ဩစရာဖြစ်စေနိုင်သည်။
ပထမဆု = $2000 X $10 = $20000 (အချို့လူများအတွက် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ဖြစ်နိုင်သည်)
ဒုတိယဆု = $1000 X $10 = $10000
တတိယဆု = $490 X $10 = $4900
စတင်သူဆု = $250 X $10 = $2500
နှစ်သိမ့်ဆု = $60 X $10 = $600
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ သင့်ကိုယ်တိုင်လောင်းကစားခြင်းဖြင့်၊ တိုက်ရိုက်/စနစ်နံပါတ်ကို ထိုးနှက်နိုင်ခြေ အလွန်နည်းပါးပါတယ်။ လမ်းက ဆင်းလာတာဆိုတော့ သိတယ်။ တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ ထီပေါက်တဲ့ အကြိမ်ရေ 100 ibet နံပါတ်ကို ဝယ်ဖူးပြီး တစ်ချက်တောင် မထိုးဖူးပါဘူး။
စနစ်/တိုက်ရိုက်နံပါတ်ကို သင်နောက်ဆုံးအကြိမ်က ဘယ်အချိန်လဲ။ ထိပ်တန်းဆု (၃) ဆုကို ဆွတ်ခူးဖို့ ညွှန်းမလား။ သို့သော် သတင်းကောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်၊ နှစ်သိမ့်မှု၊ စတင်သူနှင့် ထိပ်တန်းဆု3ခုတို့ကို ရောနှောနိုင်သည့် အလားအလာရှိသော ကျွန်ုပ်၏သက်သေပြစနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်ဂဏန်းခန့်မှန်းချက်များကို သင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ပေါ်လာဖို့ မှန်ကန်တဲ့ နံပါတ်ကို ရွေးချယ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ယနေ့ 4D အောင်မြင်မှုတွင် ကျွန်ုပ်နှင့်ပူးပေါင်းပါ။
ယနေ့ အခမဲ့7ရက်အစမ်းသုံးမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
(ဤ7ရက် အစမ်းသုံး ကမ်းလှမ်းချက်သည် အချိန်မရွေး ပိတ်နိုင်သည် ။ ၎င်းသည် ကြာမြင့်ချိန်၌ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ ။
4d သို့မဟုတ် Toto ကိုအနိုင်ရရှိရန်စတင်ရန်စိတ်ဝင်စားသည်။ $2000 အထိ 1st 4d ဆုကို ဆွတ်ခူးရန် အလားအလာရှိပါသလား။
ယနေ့ ကျွန်ုပ်ကို ဆက်သွယ်ပါ။
အခမဲ့ Ebook "စင်္ကာပူနှင့် မလေးရှား 4D အောင်ပွဲခံရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ပြသည်" သင်စာရင်းသွင်းသောအခါ!
လာမယ့် မဲဆွယ်ပွဲတွေမှာ အတူတူ ၀တ်ကြရအောင်။
4DinSingapore မှ 2012 ခုနှစ်မှ 2022 ခုနှစ်အထိ ခန့်မှန်းထားသော Singapore နှင့် Malaysia 4D နံပါတ်များ
15-11-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4D နံပါတ်များအနိုင်ရ, အောင်ပွဲခံချက်
Singapore Pools များအတွက် 2016 မှ 2022 ခုနှစ်အထိ JackPot တိုက်ရိုက်နံပါတ်ဆုကို ရရှိခြင်း
ဇွန် 22 - စတင်သည်။
4 ဇွန်လ - နှစ်သိမ့်ခြင်း။
1 မေလ - နှစ်သိမ့်ခြင်း။
13 ဧပြီလ - နှစ်သိမ့်ခြင်း။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ - စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ – နှစ်သိမ့်မှု x ၂
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ – စတင်သူ x ၂
29 January – Starter
ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် – စတင်သူ x ၃၊ နှစ်သိမ့်မှု x ၂
ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက် – စတင်သူ x ၃
ဇန်နဝါရီ ၂၂ – ဒုတိယဆု
ဇန်နဝါရီ 19 - စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု
ဇန်နဝါရီ ၁၆ – ပထမဆု
ဇန်နဝါရီ ၁၅ – နှစ်သိမ့်မှု
ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် – စတင်သူ x ၂၊ နှစ်သိမ့်မှု x ၂
5 ဇန်နဝါရီ – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု x 2
ဇန်နဝါရီ2– စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု
ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် – နှစ်သိမ့်မှု x ၃
Singapore Pools အတွက် Winning JackPot တိုက်ရိုက်နံပါတ်ကို ကြည့်ပါ။
နှစ်- 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Singapore Pools 4D အတွက် 4D နံပါတ်များကို 2012 မှ 2022 ခုနှစ်အထိ အနိုင်ရရှိခြင်း။
23 Jan 2022 – 0267 Win System 7026 (တတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
23 Jan 2022 – 9582 Direct 9582 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
23 Jan 2022 – 2589 Win System 9582 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
22 Jan 2022 – 2569 Win System 6295 (Starter Prize) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
22 Jan 2022 – 3679 Win System 3967 (Starter Prize) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
16 ဇန်နဝါရီလ 2022 – 3468 Win System 3648 (ပထမဆု) – Platinum T3P ခန့်မှန်းချက်
09 Jan 2022 – 3479 Win System 3794 (Starter Prize) – Platinum T3P ခန့်မှန်းချက်
09 Jan 2022 – 3679 Win System 9736 (Starter Prize) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
08 Jan 2022 – 3459 Win System 5943 (Starter Prize) – Platinum T3P ခန့်မှန်းချက်
08 Jan 2022 – 3445 Win System 4345 (Starter Prize) – Platinum T3P ခန့်မှန်းချက်
08 Jan 2022 – 1379 Win System 3719 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
05 Jan 2022 – 0468 Win System 4086 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum T3P ခန့်မှန်းချက်
Winning Singapore Pools 4D နံပါတ်များကို ကြည့်ပါ။
နှစ်- 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Malaysia Magnum 4D အတွက် 2014 မှ 2022 ခုနှစ်အထိ 4D နံပါတ်များ အနိုင်ရရှိခြင်း။
29 Jan 2022 – 2249 Win System 9224 (Special Prize) – Elite Prediction
23 Jan 2022 – 1369 Win System 9316 (အထူးဆု) – Platinum T3P ခန့်မှန်းချက်
23 Jan 2022 – 3589 Win System 9385 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
23 Jan 2022 – 0157 Win System 5710 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum T3P ခန့်မှန်းချက်
22 Jan 2022 – 0158 Win System 5810 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Elite Prediction
22 Jan 2022 – 0234 Win System 4203 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Elite Prediction
22 Jan 2022 – 0234 Win System 4203 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum T3P ခန့်မှန်းချက်
22 Jan 2022 – 0234 Win System 4203 (နှစ်သိမ့်ဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
16 Jan 2022 – 5699 Win System 9596 (အထူးဆု) – Platinum T3P ခန့်မှန်းချက်
16 Jan 2022 – 0179 Win System 0971 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
15 Jan 2022 – 0036 Win System 6030 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Elite Prediction
12 Jan 2022 – 5940 Direct 5940 (ဒုတိယဆု) – ပလက်တီနမ်တိုက်ရိုက်ခန့်မှန်းချက်
12 Jan 2022 – 0459 Win System 5940 (ဒုတိယဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
09 Jan 2022 – 3789 Win System 8739 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
09 Jan 2022 – 3789 Win System 7389 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
08 Jan 2022 – 2236 Win System 2623 (အထူးဆု) – Elite Prediction
05 Jan 2022 – 1459 Win System 4915 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
02 ဇန်နဝါရီ 2022 – 1459 Win System 4159 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
01 Jan 2022 – 0459 Win System 4059 (အထူးဆု) – Elite Prediction
01 Jan 2022 – 0459 Win System 4059 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
Winning Malaysia Magnum 4D နံပါတ်များကို ကြည့်ပါ။
နှစ်- 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
တိုက်ရိုက် 4d နံပါတ် / စနစ် 4d နံပါတ်ကို အနိုင်ရရှိရန် စတင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါ။ $2000 အထိ 1st ဆုရရှိရန် အလားအလာရှိပါသလား။
ယခု စာရင်းသွင်းရန် အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန့်မှန်းချက်မှ မကြာသေးမီက ထိပ်တန်းဆုများ ထိုးနှက်ချက်
14-11-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4D ရလဒ်များ
JackPot တိုက်ရိုက်နံပါတ် (စင်ကာပူရေကူးကန်များ)
ဇန်နဝါရီ 22 ရက် 2022 – 2nd Prize Strike 4983
15 ဇန်နဝါရီလ 2022 - 1st ဆုသပိတ် 3648
26 ဒီဇင်ဘာ 2021 – 2nd Prize Strike 7209
12 ဒီဇင်ဘာ 2021 – 1st Prize Strike 8967
7 နိုဝင်ဘာ 2021 – 2nd Prize Strike 7062
24 အောက်တိုဘာ 2021 – တတိယဆု 6159
20 အောက်တိုဘာ 2021 – တတိယဆု 1762
2 အောက်တိုဘာလ 2021 - တတိယဆု 6985
5 စက်တင်ဘာ 2021 – တတိယဆု 1605
1 စက်တင်ဘာ 2021 – 1st Prize Strike 4879
22 သြဂုတ် 2021 – 1st ဆု Strike 0298
22 သြဂုတ် 2021 – 2nd Prize Strike 9784
14 ဇူလိုင် 2021 – တတိယဆု 8413
7 ဇူလိုင် 2021 – တတိယဆု 9061
23 ဇွန်လ 2021 - တတိယဆု 6195
2021 ခုနှစ် မေလ 30 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 2610
1 May 2021 – 1st Prize Strike 4509
24 ဧပြီလ 2021 - တတိယဆု 6471
10 ဧပြီလ 2021 - 1st Prize Strike 5390
4 ဧပြီလ 2021 - တတိယဆု 1479
28 မတ်လ 2021 – 2nd Prize Strike 8693
14 ဖေဖော်ဝါရီ 2021 – 2nd Prize Strike 9510
31 ဇန်နဝါရီ 2021 – တတိယဆု 2706
17 ဇန္နဝါရီ 2021 - 1st ဆုသပိတ် 0729
17 ဇန်နဝါရီ 2021 – 1st Prize Strike 8431
2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 30 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 6835
27 ဒီဇင်ဘာ 2020 – 2nd Prize Strike 1276
23 ဒီဇင်ဘာ 2020 – 1st Prize Strike 7283
23 ဒီဇင်ဘာ 2020 – တတိယဆု 1409
19 ဒီဇင်ဘာ 2020 – တတိယဆု 9042
13 ဒီဇင်ဘာ 2020 – 1st Prize Strike 5482
2 ဒီဇင်ဘာ 2020 – တတိယဆု 7682
2020 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 22 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 1975
2020 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 22 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 7921
18 နိုဝင်ဘာ 2020 – တတိယဆု 2846
7 အောက်တိုဘာ 2020 - တတိယဆု 0934
2020 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ 30 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 2659
26 သြဂုတ် 2020 – 2nd Prize Strike 1537
23 သြဂုတ် 2020 – တတိယဆု Strike 3924
22 သြဂုတ် 2020 – 2nd Prize Strike 5431
16 သြဂုတ် 2020 – 1st Prize Strike 8632
9 သြဂုတ် 2020 – 1st ဆု Strike 7895
8 သြဂုတ် 2020 – 1st Prize Strike 1406
5 သြဂုတ် 2020 – 1st Prize Strike 4963
2020 ခုနှစ် ဇွန်လ 27 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 8571
27 ဇွန်လ 2020 - ပထမဆု 0798
Circuit Breaker ကာလ (7ဧပြီလ မှ 21 ဇွန်လ 2020 ) အတွင်း ဆွဲခြင်းအားလုံးကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါသည်။
4 ဧပြီလ 2020 - တတိယဆု 9856
1 ဧပြီလ 2020 - 1st Prize Strike 3054
7 မတ်လ 2020 - 1st ဆုသပိတ် 3581
16 ဖေဖော်ဝါရီ 2020 – 2nd Prize Strike 1854
19 ဖေဖော်ဝါရီလ 2020 - တတိယဆု 6273
16 ဖေဖော်ဝါရီ 2020 – 2nd Prize Strike 6940
8 ဇန်နဝါရီ 2020 – 2nd Prize Strike 2978
2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 1067
2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 1365
4 ဇန်နဝါရီ 2020 - တတိယဆု 1425
23 ဇန်နဝါရီ 2022 – တတိယဆု 7026
19 ဒီဇင်ဘာ 2021 – တတိယဆု ၃၉၇၅
12 ဒီဇင်ဘာ 2021 – တတိယဆု Strike 3267
24 အောက်တိုဘာလ 2021 - 1st ဆုသပိတ် 5376
20 နိုဝင်ဘာ 2021 – 2nd Prize Strike 3182
24 အောက်တိုဘာ 2021 – 1st ဆု Strike 3761
13 အောက်တိုဘာလ 2021 - 1st ဆုသပိတ် 1264
10 အောက်တိုဘာ 2021 – 2nd Prize Strike 6517
26 စက်တင်ဘာ 2021 – ပထမဆု 0827
19 စက်တင်ဘာ 2021 – 1st Prize Strike 3691
14 သြဂုတ် 2021 – 1st ဆုသပိတ် 1767
4 သြဂုတ် 2021 – 2nd Prize Strike 8720
28 ဇူလိုင် 2021 – တတိယဆု Strike 3475
17 ဇူလိုင် 2021 – တတိယဆု Strike 1785
26 ဇွန်လ 2021 - တတိယဆု 4077
11 ဇွန်လ 2021 - 1st ဆုသပိတ် 7452
11 ဇွန်လ 2021 - တတိယဆု Strike 8052
23 မေလ 2021 – 2nd Prize Strike 4907
2021 ခုနှစ် မေလ 22 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 5407
9 မေလ 2021 - တတိယဆု 1234
1 မေလ 2021 – 2nd Prize Strike 6798
18 ဧပြီလ 2020 - တတိယဆု 4051
7 ဧပြီလ 2021 - 1st Prize Strike 4756
မတ်လ 20 ရက် 2021 – 2nd Prize Strike 3857
10 မတ်လ 2021 - 1st ဆုသပိတ် 8549
17 ဖေဖော်ဝါရီလ 2021 - 1st ဆုသပိတ် 2548
7 ဖေဖော်ဝါရီ 2021 – 2nd Prize Strike 7712
13 ဇန်နဝါရီ 2021 – 1st Prize Strike 1023
27 ဒီဇင်ဘာ 2020 – တတိယဆု 7924
12 ဒီဇင်ဘာ 2020 – 2nd Prize Strike 1986
5 ဒီဇင်ဘာ 2020 – တတိယဆု 6158
2020 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 9405
18 အောက်တိုဘာ 2020 – တတိယဆု 2387
13 စက်တင်ဘာ 2020 – 2nd Prize Strike 5416
2020 ခုနှစ် ဩဂုတ်လ2ရက် – 2nd Prize Strike 6876
29 ဇူလိုင် 2020 – 1st ဆု Strike 7064
26 ဇူလိုင် 2020 – တတိယဆု Strike 3681
12 ဇူလိုင် 2020 – တတိယဆု 0742
5 ဧပြီလ 2020 – 2nd Prize Strike 3028
မတ်လ 18 ရက် 2020 – 2ndPrize Strike 0257
16 ဖေဖော်ဝါရီ 2020 – 2nd Prize Strike 1853
9 ဖေဖော်ဝါရီလ 2020 - တတိယဆု 7526
26 ဇန်နဝါရီ 2020 – 1st Prize Strike 8476
18 ဇန်နဝါရီလ 2020 - ဒုတိယဆု 0090
12 ဇန္နဝါရီ 2022 – 2nd Prize Strike 5940
12 ဒီဇင်ဘာ 2021 – 2nd Prize Strike 3265
6 အောက်တိုဘာလ 2021 - 1st ဆုသပိတ် 1630
အောက်တိုဘာလ6ရက် - တတိယဆု 9254
29 စက်တင်ဘာ 2021 – 1st Prize Strike 7766
26 စက်တင်ဘာ 2021 – တတိယဆု 2798
2021 ခုနှစ် မေလ 30 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 5241
23 မေလ 2021 – 2nd Prize Strike 5862
1 မေလ 2021 - တတိယဆု 2671
28 ဧပြီလ 2021 - တတိယဆု 9344
7 ဧပြီလ 2021 - တတိယဆု Strike 1348
3 ဧပြီလ 2021 - တတိယဆု 5185
17 ဖေဖော်ဝါရီ 2021 – 1st Prize Strike 8119
13 ဖေဖော်ဝါရီ 2021 – တတိယဆု 2587
10 ဖေဖော်ဝါရီလ 2021 - တတိယဆု 9814
7 ဖေဖော်ဝါရီ 2021 - 1st Prize Strike 8100
3 ဖေဖော်ဝါရီ 2021 – 1st ဆု Strike 4503
2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 5083
2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 30 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 0265
20 ဒီဇင်ဘာ 2020 – 1st Prize Strike 7845
2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ2ရက် - 1st ဆု 0578
28 နိုဝင်ဘာ 2020 – တတိယဆု 9765
2020 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 25 ရက်နေ့ - တတိယဆု 8170
14 နိုဝင်ဘာ 2020 – တတိယဆု 1085
4 နိုဝင်ဘာ 2020 – ဒုတိယဆု ၃၅၉၈
2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 21 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 7523
14 အောက်တိုဘာ 2020 – တတိယဆု 8936
11 အောက်တိုဘာလ 2020 - 1st ဆုသပိတ် 3622
စက်တင်ဘာလ2ရက် 2020 – 2nd Prize Strike 5236
8 သြဂုတ် 2020 – တတိယဆု 4118
ဩဂုတ်လ2ရက် 2020 – 2nd Prize Strike 3241
21 ဇွန်လ 2020 – 1st Prize Strike 7160
Movement Control Order ကာလ (15 မတ်လ မှ 16 ဇွန်လ 2020) အတွင်း ဆွဲငင်မှုများအားလုံးကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါသည်။
11 မတ်လ 2020 - 1st ဆုသပိတ် 8419
11 မတ်လ 2020 - တတိယဆု 7142
12 ဖေဖော်ဝါရီ 2020 – 1st Prize Strike 7136
9 ဖေဖော်ဝါရီလ 2020 - တတိယဆု 8130
26 ဇန်နဝါရီ 2020 – 2nd Prize Strike 6724
18 ဇန်နဝါရီ 2020 - တတိယဆု 8261
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောကိန်းထုတ်မှု 2016 မှ 2020 အထိ လတ်တလော ထိပ်တန်းဆုများ
2020 ခုနှစ်မှစ၍ 4DinSingapore မှ ဟောကိန်းထုတ်ထားသော Singapore Toto နံပါတ်များ အနိုင်ရခြင်း။
13-11-2020 တွင် တင်ခဲ့သည် : 4D မာစတာ | တွင် : အောင်ပွဲခံချက်
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ချက်ချင်းအနိုင်ရသောရလဒ်များကို ယခုစတင်ရယူလိုက်ပါ။
6 စုစုပေါင်းနံပါတ် - နောက်ထပ်နံပါတ်
ရဲရင့်သည်။ စင်္ကာပူ ToTo နံပါတ်ပေါ်တွင် သပိတ်ကို ညွှန်ပြပါ။
8 12 28 29 35 47 – 33 (နံပါတ်4နံပါတ်ထိ!)
8 13 27 29 34 45 – 36 (နံပါတ်4နံပါတ်ထိ!)
10 18 21 29 31 46 –5(4 နံပါတ် hits!)
9 13 22 30 41 46 –4(နံပါတ်4နံပါတ်ထိ!)
5718 28 30 42 – 39 (နံပါတ်4နံပါတ်ထိ!)
ဇန်နဝါရီ ၂၇ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇန်နဝါရီ ၂၄ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇန်နဝါရီ 21 သောကြာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇန်နဝါရီ ၁၇ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇန်နဝါရီ 10 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
07 ဇန်နဝါရီ သောကြာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
03 ဇန်နဝါရီ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဒီဇင်ဘာ 20 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဒီဇင်ဘာ 13 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဒီဇင်ဘာ 02 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
နိုဝင်ဘာ 25 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
နိုဝင်ဘာလ 15 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
1 18 23 34 39 48 – 26 (နံပါတ်4နံပါတ်ထိ!)
08 နိုဝင်ဘာ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
နိုဝင်ဘာလ 04 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
01 နိုဝင်ဘာလ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
18 အောက်တိုဘာလ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
11 အောက်တိုဘာလ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
07 အောက်တိုဘာလ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
04 အောက်တိုဘာလ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
စက်တင်ဘာ ၂၃ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
9 17 33 35 41 43 – 26 (နံပါတ်4နံပါတ်ထိ!)
စက်တင်ဘာ 20 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
စက်တင်ဘာ 13 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
စက်တင်ဘာလ 09 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
စက်တင်ဘာလ 02 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
10 18 19 28 33 34 – 42 (4 နံပါတ်ထိ!)
သြဂုတ်လ 30 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
သြဂုတ် ၂၆ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
သြဂုတ် ၂၃ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
4 10 19 26 31 40 –5(4 နံပါတ် hits!)
သြဂုတ် ၁၉ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
သြဂုတ် ၁၆ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
သြဂုတ်လ 05 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
သြဂုတ်လ 02 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
10 20 26 33 39 44 – 12 (နံပါတ်5နံပါတ် !)
ဇူလိုင် ၂၉ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇူလိုင်လ 22 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇူလိုင်လ 12 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
2 19 23 38 41 47 – 24 (4 နံပါတ် hits!)
08 ဇူလိုင် ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
05 ဇူလိုင်လ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
8 14 29 32 36 45 – 30 (နံပါတ်4နံပါတ်ထိ!)
ဇူလိုင်လ 01 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇွန်လ 24 ရက် ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇွန်လ 21 ရက် တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇွန်လ 17 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇွန်လ 14 ရက် တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇွန်လ 10 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
မေလ 31 ရက် တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
မေလ 24 ရက် တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
6 13 18 24 31 49 – 33 (4 နံပါတ်ထိ!)
မေလ 13 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဧပြီလ ၂၉ ရက် ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဧပြီလ ၂၆ ရက် တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဧပြီလ 15 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
18 22 23 35 40 46 – 10 (နံပါတ်4နံပါတ်ထိ!)
08 ဧပြီလ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
မတ်လ 29 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
မတ်လ 18 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
မတ်လ 15 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
မတ်လ 11 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
မတ်လ 04 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
မတ်လ 01 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
5722 25 37 49 –3(နံပါတ်4နံပါတ်ထိ!)
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
6 17 20 21 40 44 – 15 (4 နံပါတ် hits!)
ဖေဖော်ဝါရီ 15 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဖေဖော်ဝါရီ 11 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
08 ဖေဖော်ဝါရီ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
05 ဖေဖော်ဝါရီ သောကြာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇန်နဝါရီ ၂၈ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇန်နဝါရီ 25 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇန်နဝါရီ ၂၁ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဇန်နဝါရီ ၁၄ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
11 ဇန်နဝါရီ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
07 ဇန်နဝါရီ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
04 ဇန်နဝါရီ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
5719 26 37 40 – 11 (5 နံပါတ် hits!)
ဒီဇင်ဘာ ၂၁ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဒီဇင်ဘာ 17 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ဒီဇင်ဘာ 10 ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
07 ဒီဇင်ဘာ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
နိုဝင်ဘာလ 30 တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
နိုဝင်ဘာ ၂၆ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
နိုဝင်ဘာ ၂၃ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
နိုဝင်ဘာ ၁၉ ကြာသပတေးနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
16 နိုဝင်ဘာ တနင်္လာနေ့ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
9 နိုဝင်ဘာ Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
5 နိုဝင်ဘာလ 2020 ခုနှစ် Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
2020 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ2ရက် Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
12 အောက်တိုဘာလ 2020 ခုနှစ် Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
1 အောက်တိုဘာလ 2020 ခုနှစ် Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
24 စက်တင်ဘာ 2020 Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
21 စက်တင်ဘာ 2020 Toto ခန့်မှန်းရလဒ်
ငါတို့ရဲ့စကားအတွက်ချည်းပဲ မယူလိုက်ပါနဲ့… ငါတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေ ငါတို့နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာ ကြည့်ပါ။
10-11-2020 တွင် တင်ခဲ့သည် : 4D မာစတာ | တွင် : အောင်ပွဲခံချက်
စစ်မှန်သောရလဒ်များဖြင့် စစ်မှန်သော ဝဘ်ဆိုဒ်။
01-11-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : အထွေထွေ
စင်ကာပူ 4D ToTo Magnum 4D – 4DinSingapore
25-09-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : စင်ကာပူ မလေးရှား 4D ဗီဒီယို
4D Singapore, Singapore Pools, Singapore ToTo, Spore ToTo, ToTo in Singapore, Magnum 4D, Spore Pools, 4D Malaysia, Singapore Prize, 4D in Malaysia, www singaporepools com sg, 4D Singapore Hari Ini, 4D Result Malaysia, SG 4D, 4D Lotto၊ Singaporepools အားကစား၊ 4D မှတ်တမ်း၊ 4D ဆုဂဏန်းတွက်စက်၊ Spore Toto ရလဒ်။
4D Member Strike 1st Prize နှင့် $9000 အနိုင်ရ
05-09-2020 တွင် တင်ခဲ့သည် : 4D မာစတာ | တွင် : 4D Winning Tickets အထောက်အထား
ကျွန်ုပ်ပါဝင်ပြီး တစ်လအကြာတွင် သင်၏ထိပ်တန်းခန့်မှန်းချက် 5789 မှ 1st ဆုမဲကို ဒီဇင်ဘာလ 11 ရက်နေ့တွင် မဲနှိုက်သောအခါတွင် ကျွန်ုပ်သည် $9000 ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် နောက်ထပ် ကံထူးရှင်များစွာကို ဆက်လက်ခန့်မှန်းပေးပါဦးနော်။
ပထမအကြိမ်ဝယ်ယူပြီး 1st Prize 4D ကိုနှိပ်ပါ။
25-08-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4D Winning Tickets အထောက်အထား, အောင်ပွဲခံချက်
အစောပိုင်းအီးမေးလ်တွင် ပူးတွဲပါရှိသော အွန်လိုင်းလက်မှတ်ကို ကျွန်ုပ်ပေးထားပါသည်။ singaporepools ဝဘ်ဆိုဒ်ကနေ အွန်လိုင်းကနေ ဝယ်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ်ဝယ်ပြီး ပထမဆုရသွားပါပြီ။ နံပါတ်အဝယ်စနစ်။
ဒါကိုမြင်တဲ့ နောက်ထပ်ဧည့်သည်2ယောက်အတွက် - 4D အဖွဲ့ဝင်ခြင်းအတွက် $10 လျှော့စျေးကူပွန်။
22-08-2020 တွင် တင်ခဲ့သည် | : 4D မာစတာ | တွင် : 4DInSingapore သတင်း, ဈေးရောင်း
4D အဖွဲ့ဝင်ခြင်းအတွက် $10 လျှော့စျေးကူပွန်။ အချိန်ကန့်သတ်ချက်သာ။
Singapore Pools အဖွဲ့ဝင် Winning Video Testimonial
20-08-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : အောင်ပွဲခံချက်
4D အဖွဲ့ဝင်မှု အမျိုးအစား
15-08-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4DInSingapore သတင်း
ငွေ၊ ရွှေ၊ ပလက်တီနမ်၊ အထက်တန်းစားအသင်းဝင်များကို ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။ သင်နှင့် ကိုက်ညီသော အဖွဲ့ဝင်ခြင်းကို ရွေးချယ်ပြီး ယနေ့ 4d အနိုင်ရသည့် ဘဝပုံစံကို စတင်ပါ။ 4d နံပါတ်များကို ခန့်မှန်းခြင်း မရှိတော့ပါ။ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆု၊ စတန်းဆု၊ နှစ်သိမ့်ဆုများ အားလုံးသည် သင့်အတွက် လက်သင့်ခံနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ဝင်ခြင်းအတွက် ယခုပဲ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ JackPot တိုက်ရိုက်ဂဏန်းခန့်မှန်းချက်အသစ်ဖြင့် ကံကောင်းခြင်းများကို ရယူလိုက်ပါ။ (စင်္ကာပူရေကူးကန်)
05-08-2020 တွင် တင်ခဲ့သည် : 4D မာစတာ | တွင် : 4DInSingapore သတင်း
JackPot တိုက်ရိုက်နံပါတ်ခန့်မှန်းချက် (စင်္ကာပူရေကူးကန်များ)
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရိုဂရမ်အသစ်ဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေအနည်းဆုံး ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်နံပါတ်ဖြင့် အနိုင်ရရန် အခွင့်အရေးကို ယခု ရပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အကြိမ်တိုင်းတွင် အဖွဲ့ဝင် 400 မှ 1200 သည် ဤ jackpot အစီအစဉ်မှ တိုက်ရိုက်နံပါတ်ကို ရရှိလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
1. 8 မှ 12 ထိ အသင်းဝင်တစ်ဦးစီအား အသင်းဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်သည့်အခါ မဲနှိုက်ခြင်းတိုင်းအား တိုက်ရိုက်နံပါတ်များပေးပါမည်။ တိုက်ရိုက်ဂဏန်း 8 မှ 12 လုံးတွင် လောင်းသင့်သည်။
2. သပိတ်မှောက်ပြီး ပေးပို့ပါ။ သင်၏အနိုင်ရလက်မှတ်များ ရန် [email protected]
ပလက်တီနမ်အသင်းဝင်တစ်ဦး ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်း3ဆုအလားအလာနှင့်အတူ လုပ်ကြံမှုနှုန်းမြင့်မားသောနံပါတ် ထို့နောက်တွင် ရွှေနှင့် ငွေအသင်းဝင်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
3. သင်သည် 10% မှ 25% အကြား သင်၏အနိုင်ရသောပေါင်းလဒ်၏ တိုကင်တစ်ခုကို တန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည့်သင်္ကေတအဖြစ် ပေးပို့လိုပေမည်။ ဤငွေပေးချေမှုလင့်ခ်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ တိုကင်နံပါတ်ကို ပေးပို့ပါ။ [email protected]
“JackPot” ကို လောင်းကစားခြင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်နံပါတ် ခန့်မှန်းချက်"၊ သင်သည် သင်၏အနိုင်ရလက်မှတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ရန် သဘောတူပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါက သင်၏အကောင့်သည် "JackPot တိုက်ရိုက်နံပါတ် ခန့်မှန်းချက်" ကို လက်ခံရရှိခြင်းမှ အရည်အချင်းမပြည့်မီပါ။
* Jackpot တိုက်ရိုက်နံပါတ်ခန့်မှန်းခြင်းကို Malaysia 4D အတွက် လောလောဆယ်မရနိုင်ပါ။
4DinSingapore တွင် အမေးများသောမေးခွန်းများ
01-08-2020 တွင် တင်ခဲ့သည် : 4D မာစတာ | တွင် : အထွေထွေ
1) ဤ 4d တိုတိုဟောကိန်းဆိုက်သည် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန့်မှန်းခြေဆိုက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် 2012 ခုနှစ်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုဒ်အတုဖြစ်နေပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုအချိန်အထိ လည်ပတ်နေမည်မဟုတ်ပေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိတွင် Singapore Pool 4D နှင့် Toto အပြင် Malaysia Magnum 4D အတွက် ခန့်မှန်းချက်ပေးပါသည်။
3) မင်းရဲ့ဟောကိန်းတွေကိုသုံးပြီး ဆုတစ်ခုကို ငါရိုက်ခဲ့တယ်၊ ငါအနိုင်ရတာကို မင်းနဲ့မျှဝေပေးရမှာလား။
သင်သည် သင်၏အနိုင်ရရှိမှု၏ 100% ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း သင်၏အောင်မြင်မှုအပိုင်းကို ကျွန်ုပ်၏ paypal အကောင့်သို့ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ [email protected] ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ငွေပေးချေမှုလင့်ခ်.
က) paypal အကောင့်မရှိဘူးလား။
- လိုက်နာပါ။ ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ် သင်၏ခရက်ဒစ်/ဒက်ဘစ်ကတ်အချက်အလက်ကို သော့ဖွင့်ထားချိန်တွင် paypal သည် သင့်အား paypal အကောင့်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန် တောင်းဆိုလိမ့်မည်။
ခ) ခရက်ဒစ်ကတ် မရှိဘူးလား။
- မာစတာ သို့မဟုတ် ဗီဇာလိုဂိုပါရှိသော ဒက်ဘစ်ကတ်တစ်ခုရှိပါက paypal ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ဂ) ကတ်တွေ မရှိဘူးလား။
- သင့်ဘဏ်အကောင့်ကို သင်၏ paypal နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ဖတ်ပါ။ ဘဏ်အကောင့်ကို paypal နှင့် ချိတ်ဆက်နည်း သင်ခန်းစာ.
ဃ) ကျွန်ုပ်သည် paypal မှတဆင့် ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း မရှိပါ၊ အခြားငွေပေးချေမှုပုံစံ ရှိပါသလား။
- ကျွန်ုပ်ကို ဆက်သွယ်ပါ။ [email protected] အခြားငွေပေးချေမှုမုဒ်အတွက်။ ယခု သင်နေထိုင်သည့်နိုင်ငံကို ကျေးဇူးပြု၍ ဖော်ပြပါ။
5) 4DinSingapore သည် အွန်လိုင်းလောင်းကစားဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသလား။
မဟုတ်ဘူး ငါတို့မလုပ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခန့်မှန်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုသာ ပေးဆောင်ပါသည်။
6) ငွေပြန်အမ်းရန် အာမခံပေးပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရက် 30 ငွေပြန်အမ်းရန်အာမခံချက်ပေးသည်။ အဖွဲ့ဝင်ပြီး ရက် 30 အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့ပါ။
7) ကျွန်တော့်မှာ မေးခွန်းအချို့ရှိပေမယ့် ဒီနေရာမှာ အဖြေမပေးပါ။
ကျေးဇူးပြု ငါ့ကိုဒီမှာဆက်သွယ်ပါ။ နောက်ထပ်စုံစမ်းမေးမြန်းရန်။
4D Prediction Singapore Pools 4D၊ Magnum 4D
25-07-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4D ခန့်မှန်းချက် - Singapore Pools၊ Magnum Malaysia 4D
4D Prediction Singapore၊ အခမဲ့ 4D Prediction Singapore၊ မနက်ဖြန်အတွက် 4D Prediction၊ Singapore 4D Prediction Chart၊ 4D Number Prediction၊ Free 4D Singapore Pools Result Prediction Singapore Pools 4D အနိုင်ရဂဏန်းများ ခန့်မှန်းချက်၊ 4D ခန့်မှန်းချက်၊ ယနေ့ 4D ခန့်မှန်းချက်
သင်၏ 4d ခန့်မှန်းချက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်၊ အရင်ဝင်ပါ။ ပြီးလျှင် လာမည့်မဲနှိုက်မည့်ရက်စွဲ၏ အဖွဲ့ဝင်ရာထူးသို့ ဆင်းပါ။ အဖြူရောင်နောက်ခံတွင်နံပါတ်များကိုကြည့်ပါ။
SG pools နှင့် magnum malaysia တွင် လောင်းကစားရန် အခမဲ့ 4d နံပါတ်ကို ရှာဖွေနေပါသလား။ နောက်ထပ်မကြည့်ပါနဲ့၊ ငါတို့ကိုစမ်းကြည့်ပါ။7ရက် အခမဲ့ ပရီမီယံ အစမ်းသုံးခြင်း။ ယနေ့အနိုင်ရဂဏန်းများရယူရန်။ ခရက်ဒစ်ကတ် မလိုအပ်ပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 4D ဆွဲခြင်း - တနင်္လာနေ့ ည9နာရီတွင် တင်ပေးပါမည်။
စနေ 4D ဆွဲခြင်း - ကြာသပတေးနေ့ ည9နာရီတွင် တင်ပေးပါမည်။
တနင်္ဂနွေ 4D ဆွဲခြင်း - စနေနေ့ည 11 နာရီတွင်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့နံနက် 10 နာရီမှာတင်ပါ။
* Malaysia Magnum 4D အတွက် အင်္ဂါနေ့ အထူးမဲအတွက် ခန့်မှန်းချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မလုပ်ပါ။
4d အနိုင်ရရှိရန် ထီပေါက်တိုင်း ကံစမ်းမဲ4ခုကို ရွေးပေးမည်ဖြစ်ပြီး ယနေ့တွင် toto 4d ကံကောင်းသောထီဆုရှင်ဖြစ်ပါစေ။
မကစားမီ အောက်ပါအကြံပြုချက်များကို ဖတ်ပါ။
– 4D ကစားရန် အဓိက ဗျူဟာ ၄ ခု
– စင်္ကာပူတွင် 4D နံပါတ်များကစားနည်း
– 4D နည်းဗျူဟာ Net ကို ရေးဆွဲခြင်း။
– အသုံးဝင်သော 4D အကြံပြုချက်များ
– 4D တိုက်ရိုက်နံပါတ်လောင်းကစားနည်းဗျူဟာ 1 – 4D မကြာခဏရိုက်ပါ။
– 4D တိုက်ရိုက်နံပါတ်လောင်းကစားနည်းဗျူဟာ2- စိတ်ရှည်ခြင်းသည် အသေးစားလောင်းခြင်းနှင့် အကြီးစားအနိုင်ရခြင်း၏ သီလဖြစ်သည်။
jackpot ကိုဖမ်းယူရန်စမတ်ကျကျကစားပါ။ အလွန်တက်ကြွပြီး အပြုသဘောဆောင်သော အမြင်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။ အဆိုးမြင်စိတ်တွေကို ရှောင်ပါ။ မင်းရဲ့ရှုံးတဲ့နည်းလမ်းတွေကို နောက်ကွယ်မှာထားပြီး 4d ထိပ်တန်းဆုရဖို့ ကြိုးစားဖို့ အချိန်တန်နေပါပြီ။
အရေးကြီးသည်- 4D သည် လောင်းကစားဂိမ်းအားလုံးပြီးပါက သင့်ဘတ်ဂျက်အတွင်း ကစားပါ။
နောက်ဆုံးရ 4dinsingapore ဆောင်းပါးများ
05-07-2020 တွင် တင်ခဲ့သည် : 4D မာစတာ | တွင် : စင်ကာပူ မလေးရှား 4D ဆောင်းပါးများ
4D checker သည် အလောင်းအစားများကို 4D ဂိမ်းများတွင် ကြီးမားသောငွေများရရှိရန် အဘယ်ကြောင့် နှင့် မည်သို့ကူညီပေးသနည်း။
Singapore pools အကောင့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ငွေဖြည့်ခြင်းအတွက် လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများ
ဆုကြေးငွေ စင်္ကာပူတွင် ဆုကြေးငွေများနှင့် တောင်းဆိုမှုကာလသည် အဘယ်နည်း။
ကျွန်ုပ်အနီးရှိ စင်္ကာပူရေကူးကန်များ၏ အကောင်းဆုံးထွက်ပေါက်ကို စစ်ဆေးပါ။
4d roll price payout နှင့် cost entry ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
4d အနိုင်ရသည့်ဘောက်စ်ခန့်မှန်းချက်ဖြင့် ကြီးကြီးမားမားငွေရှာရန် အခွင့်အလမ်းများတိုးရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
စင်္ကာပူ မလေးရှားထီရလဒ်အတွက် ကံကောင်းသောဂဏန်းများကို ခန့်မှန်းရန် အသုံးဝင်သော အကြံပြုချက်အချို့
ယနေ့ခေတ် Magnum 4D ရလဒ်သည် အဘယ်ကြောင့် ဤမျှရေပန်းစားနေသနည်း။
Toto Singapore တွင်အလုပ်လုပ်သော Lucky Tricks
အကြံဥာဏ်များနှင့် Magnum Jackpot Gold ဂိမ်းကို ကစားနည်း
Slot Machines ကိုကစားခြင်း – အခွင့်အလမ်း သို့မဟုတ် ကံကောင်းခြင်းဂိမ်း
ခြစ်ရာ ထီလက်မှတ်များ ကစားခြင်း။
Singapore 4D တိုက်ရိုက်ဆွဲခြင်း streaming - မကြာခဏဆွဲထားသောနံပါတ်များ
Poker Table - ဂိမ်းကို စစ်မှန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
Poker Tournament ကိုအနိုင်ရရှိရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသော အရေးကြီးသောအချက်များ
Bingo ကို ဘယ်လိုကစားမလဲ။
အားကစားလောင်းကစားနှင့် ကြီးကြီးမားမားအနိုင်ရခြင်းအတွက် ကောင်းမွန်သောစနစ်တစ်ခုကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
နောက်ဆုံး 4D ရလဒ်များ – Singapore Pools၊ Malaysia Magnum
01-07-2020 တွင်တင်ခဲ့သည် | : 4D မာစတာ | တွင် : 4D ရလဒ်များ
4D Singapore Pool Result ယနေ့၊ Singapore Pools 4D Live Draw၊ Singapore Prize 4D၊ 4D Result Singapore Pool Today၊ Latest 4D Result Singapore၊ 4D Result Singapore Pool Today Live၊ 4D Result စင်္ကာပူ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ 4D ရလဒ် စင်ကာပူ စနေနေ့၊ 4D ရလဒ် စင်ကာပူ တနင်္ဂနွေ၊ ယနေ့ 4D ရလဒ် 2020၊ Singapore Pools 4D ရလဒ်၊ တိုက်ရိုက် Singapore Pools၊ 4D ရလဒ်များ 2020 Singapore
4D Result Singapore Pool ပုံများကို ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ 6:30 တွင် ရေးဆွဲပါသည်။ နောက်ဆုံးရ 4D ရလဒ်များ စင်ကာပူကို အောက်တွင် ပြထားသည်။
Singapore Pools 4D ရလဒ်များ
Malaysia Magnum 4D ရလဒ်များ
နောက်ထပ် 4D ရလဒ်များ
သင်အလိုရှိသော 4D ရလဒ်များရရန်၊ ကစားနည်းကို သိရန် လိုအပ်သည်။ Singapore 4D Pools ထီတွင် အနိုင်ရသောရလဒ်များကို စတင်ရယူလိုက်ပါ။ 4d ရလဒ်ခန့်မှန်းချက်များမှ လျှို့ဝှက်ဖော်မြူလာများကို ပုံဖော်ပြီး လာမည့်မဲဆွယ်ရက်အတွက် အနာဂတ်တွင် ကံကောင်းစေမည့် 4d ဂဏန်းများကို ခန့်မှန်းပါ။ 4d ရလဒ်များအတွက် 4d ဆုငွေအိမ်သို့ အခွင့်အလမ်းများတိုးပွားလာစေရန်အတွက် လောင်းကစားနည်းစနစ်များကို ကျွမ်းကျင်ပါစေ။
ရှင်းလင်းချက်- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိ မည်သည့်ဂိမ်းရလဒ်များ၏ တိကျမှု၊ တရားဝင်မှု၊ အချိန်ကိုက်မှုနှင့်/သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုမှုမပြုလုပ်ပါ။
Posted on : 27-06-2022 | By : | တွင် : Toto ရလဒ်များ
အုပ်စု ၂ $150,516 4
အုပ်စု ၃ $2,010 206
အုပ်စု ၄ $431 525
အုပ်စု ၅ $50 14,075
အုပ်စု ၆ $25 14,937
အဖွဲ့ ၇ $10 221,365
Posted on : 27-06-2022 | By : 4D မာစတာ | တွင် : 4D ခန့်မှန်းချက် - Singapore Pools၊ Magnum Malaysia 4D
AABC၊ AABB၊ ABBC ခန့်မှန်းချက်များ၊ လောင်းကြေးပမာဏ အနည်းငယ်၊ အမြတ်များများ။
Elite အဖွဲ့ဝင်မှုတွင် ပလက်တီနမ်၊ ငွေနှင့် ရွှေအသင်းဝင်မှု ခန့်မှန်းနံပါတ်များကို အပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လောင်းကစားရန် နံပါတ် 1-2 အထိ ကျဉ်းချင်ပါသလား။ Elite အဖွဲ့ဝင်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ "Hot Number Spotted" ကဏ္ဍအသစ်ကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
ခန့်မှန်းဂဏန်းများကို ဝဘ်ဆိုက်တွင် လွှင့်တင်သည့်အခါတွင် ဦးစွာ အသိပေးလိုပါသလား။
အကြောင်းကြားရန် ဤနေရာတွင် စာရင်းသွင်းပါ။
ပလက်တီနမ်အသင်းဝင်မှုတွင် ပိုမိုမြင့်မားသောဆုအလားအလာများနှင့်အတူ အကောင်းဆုံးနံပါတ်5ကိုပေးသည်။
ယခုအခါ ပလက်တီနမ်အသင်းဝင်မှုသည် ထိပ်တန်း3ဆု3ဂဏန်း ပေါင်းစပ်နည်းလမ်းအသစ်ဖြင့် လာပါသည်။
အနိုင်ရရန် အကြံပြုထားသော Lucky 1 ဂဏန်းနှင့် ကိုက်ညီရန် သင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထိပ်တန်း3ဆု 3D Comp Method အတွက် 4d Master တစ်ကိုယ်ရေဝယ်ယူမှုနည်းဗျူဟာသည် ပလက်တီနမ်အသင်းဝင်မှုတွင် ပါဝင်သည်။
ပလက်တီနမ်အသင်းဝင်မှုသည် ငွေနှင့်ရွှေအသင်းဝင်မှုခန့်မှန်းနံပါတ်များကို အပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
$2000 အထိ 1st ဆုအထိရရှိမည့်အလားအလာနှင့်အတူတိုက်ရိုက်နံပါတ်ခန့်မှန်းခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား။
ကျွန်ုပ်၏ 4D အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းများ၊ လက်မှတ်များအပြင် 4D ဝဘ်ဆိုက်ရှိ သက်သေအထောက်အထားများကို ကြည့်ရှုပါ။
သင်၏တိုက်ရိုက်နံပါတ်ခန့်မှန်းချက်ကိုရယူပါ။ ဤနေရာတွင် စာရင်းသွင်းပါ။ အလကား!
မြင်ခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းဟု ဆိုသကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်၏ 4D အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းများ၊ လက်မှတ်များ၊ 4D ရလဒ်များအပြင် ဝဘ်ဆိုက်ရှိ သက်သေအထောက်အထားများကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။
အရေးကြီးတယ်။ မကစားခင် ဒါကိုဖတ်ပါ- စင်္ကာပူတွင် 4D နံပါတ်များကစားနည်း – 4D နည်းဗျူဟာ Net ကို ရေးဆွဲခြင်း။
အောက်တွင် ကျွန်ုပ်၏ *အခမဲ့ စနစ်နံပါတ် ခန့်မှန်းချက်သည် Singapore Pools 4D ဖြစ်သည်။
(ငွေအသင်းဝင်နံပါတ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ)
အောက်ပါတို့သည် Malaysia Magnum 4D အတွက် ကျွန်ုပ်၏ *အခမဲ့စနစ်နံပါတ် ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။
*ဆိုင်းအပ် အခမဲ့စနစ်နံပါတ် (ပုံမှန်ခန့်မှန်းချက်) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 80% ပိုမိုမြင့်မားသော လုပ်ကြံမှုနှုန်းအတွက် ပရီမီယံ (ထိပ်တန်း3ဆု) စနစ်နံပါတ်။*
ရှင်းလင်းချက်- ဒါတွေက သေချာပေါက် အနိုင်ရတဲ့ နံပါတ်တွေကို အာမခံချက် မပေးပါဘူး။ 4DinSingapore.com ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ခန့်မှန်းချက်များ (အခမဲ့ သို့မဟုတ် အခပေး); သင်၏လောင်းကြေးပမာဏဆုံးရှုံးမှုအတွက် 4DinSingapore.com ကို သင်တာဝန်မယူသင့်ပါ။ တာဝန်ယူမှုကို ဂရုတစိုက်ကစားပါ။
Posted on : 26-06-2022 | By : 4D မာစတာ | တွင် : အရှေ့ ငါ့ရလဒ်
ပထမဆု 6075 075
ဒုတိယဆု 3024 024
တတိယဆု 9041 041
ပထမဆု 5905 763
ဒုတိယဆု 2631 679
တတိယဆု 5324 226
မှတ်တမ်းများ လ ရွေးပါ ဇွန် 2022 မေ 2022 ဧပြီ 2022 မတ် 2022 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2022 ဇန်နဝါရီ 2022 ဒီဇင်ဘာ 2021 နိုဝင်ဘာ 2021 အောက်တိုဘာ 2021 စက်တင်ဘာ 2021 ဩဂုတ် 2021 ဇူလိုင် 2021 ဇွန် 2021 မေ 2021 ဧပြီ 2021 မတ် 2021 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2021 ဇန်နဝါရီ 2021 ဒီဇင်ဘာ 2020 နိုဝင်ဘာ 2020 အောက်တိုဘာ 2020 စက်တင်ဘာ 2020 ဩဂုတ် 2020 ဇူလိုင် 2020 ဇွန် 2020 မေ 2020 ဧပြီ 2020 မတ် 2020 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2020 ဇန်နဝါရီ 2020 ဒီဇင်ဘာ 2019 နိုဝင်ဘာ 2019 အောက်တိုဘာ 2019 စက်တင်ဘာ 2019 ဩဂုတ် 2019 ဇူလိုင် 2019 ဇွန် 2019 မေ 2019 ဧပြီ 2019 မတ် 2019 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2019 ဇန်နဝါရီ 2019 ဒီဇင်ဘာ 2018 နိုဝင်ဘာ 2018 အောက်တိုဘာ 2018 စက်တင်ဘာ 2018 ဩဂုတ် 2018 ဇူလိုင် 2018 ဇွန် 2018 မေ 2018 ဧပြီ 2018 မတ် 2018 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2018 ဇန်နဝါရီ 2018 ဒီဇင်ဘာ 2017 နိုဝင်ဘာ 2017 အောက်တိုဘာ 2017 စက်တင်ဘာ 2017 ဩဂုတ် 2017 ဇူလိုင် 2017 ဇွန် 2017 မေ 2017 ဧပြီ 2017 မတ် 2017 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2017 ဇန်နဝါရီ 2017 ဒီဇင်ဘာ 2016 နိုဝင်ဘာ 2016 အောက်တိုဘာ 2016 စက်တင်ဘာ 2016 ဩဂုတ် 2016 ဇူလိုင် 2016 ဇွန် 2016 မေ 2016 ဧပြီ 2016 မတ် 2016 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2016 ဇန်နဝါရီ 2016 ဒီဇင်ဘာ 2015 နိုဝင်ဘာ 2015 အောက်တိုဘာ 2015 စက်တင်ဘာ 2015 ဩဂုတ် 2015 ဇူလိုင် 2015 ဇွန် 2015 မေ 2015 ဧပြီ 2015 မတ် 2015 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2015 ဇန်နဝါရီ 2015 ဒီဇင်ဘာ 2014 နိုဝင်ဘာ 2014 အောက်တိုဘာ 2014 စက်တင်ဘာ 2014 ဩဂုတ် 2014 ဇူလိုင် 2014 ဇွန် 2014 မေ 2014 ဧပြီ 2014 မတ် 2014 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2014 ဇန်နဝါရီ 2014 ဒီဇင်ဘာ 2013 နိုဝင်ဘာ 2013 အောက်တိုဘာ 2013 စက်တင်ဘာ 2013 ဩဂုတ် 2013 ဇူလိုင် 2013 ဇွန် 2013 မေ 2013 ဧပြီ 2013 မတ် 2013 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2013 ဇန်နဝါရီ 2013 ဒီဇင်ဘာ 2012 နိုဝင်ဘာ 2012 အောက်တိုဘာ 2012 စက်တင်ဘာ 2012 ဩဂုတ် 2012 ဇူလိုင် 2012 ဇွန် 2012 မေ 2012 ဧပြီ 2012 မတ် 2012 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2012 ဇန်နဝါရီ 2012
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် သင့်အား အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies ကိုအသုံးပြုပါသည်။ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ